ဇလုံတောင် တက်မယ်ဆိုရင် စင်းလုံးငှါးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးတတ်တဲ့ တောင်တက်ကားအသင်းကိုတော့ သတိထား – Tameelay
ဇလုံတောင် တက်မယ်ဆိုရင် စင်းလုံးငှါးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးတတ်တဲ့ တောင်တက်ကားအသင်းကိုတော့ သတိထား
ဒီပြသနာလေးကိုမျက်နှာနာစရာလေးတွေရှိနေတာကြောင့်မရေးပဲနေမလို့တွေးထားပေမယ့် တော်တော်လေးနာမည်ထွက်လာတာရော ကိုယ့်pageထဲကခရီးသွားတွေ ဂျင်းမမိစေချင်တာကြောင့်ရော မျက်နှာပျက်ခံပြီးပြောချင်ပါတယ်။ကနန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးစဉ်လေးသွားရင်းနဲ့ ဇလုံတောင်ကိုပါလှည့်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်ကနေပြီးကူညီပေးမယ့်အကြောင်းပြောပေမယ့် ကိုယ့်Team ကလူတွေအကုန်လုံးက သာမန်ခရီးသည်တွေအတိုင်းပဲသွားချင်တာကြောင့် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တက်ကားတွေရှိတဲ့ CBTစခန်းကိုရောက်တော့ ညနေ၄နာရီလောက်ပါ။တောင်တက်ခက တစ်ဦးကိုအတက် ၃၀၀၀ အဆင်း၃၀၀၀ပေးရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က၆ယောက်ပါ။ဗန်းမောက်မြို့မြင့်မြတ်သွေးလှူရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က ကားဂိတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တိုအဖွဲ့တက်မယ့်အကြောင်းပြောပေးထားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့CBTရောက်တော့ကားအသင်းကမေးပါတယ်။ကားစင်းလုံးငှါးတက်မှာလား ရိုးရိုးတက်မှာလားပေါ့။ဈေးမေးတော့စင်းလုံးငှါးရင် ၄၅၀၀၀ပေးရပါတယ်။ရိုးရိုးတက်မယ်ဆိုရင်တော့လူ၁၅ယောက်ပြည့်အောင်စောင့်ရမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းရိုးရိုးတက်မယ်ပဲပြောလိုက်တယ်။အဲပြသနာကအဲ့မှာစတာပါပဲ။ပထမကတော့ နောက်ထပ်၅ယောက်လောက်ရရင်ထွက်မယ်ပေါ့။တကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့စနစ်က လူ၅ယောက်အထက်ရှိရင် ခရီးသည်ကိုတစ်နာရီပဲစောင့်ခွင့်ရှိပါတယ်။လူမပြည့်ရင်လည်း တက်ရပါတယ်။လိုတာကိုတော့ဂိတ်ကဆိုက်ပေးရပါတယ်။ညနေ၅နာရီခွဲကျော်တဲ့အခါမှာတော့ ဂိတ်ကလာပြောပါတယ်။
လူမပြည့်တဲ့အတွက် ၃၅၀၀၀ နဲ့ စင်းလုံးငှါးရမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စရောက်တဲ့အချိန်ထဲကသာ ဂိတ်ပိတ်ချိန်(6)နာရီ ရောက်လို့မှလူမပြည့်ရင် စင်းလုံးငှါးရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့အပြစ်မပြောပါဘူး။အဲ့အချိန်မှာအလှည့်ကျထွက်ရမယ့်ကားကအသင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်မထွက်ပေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့်လည်း ဂျင်းဆိုတာသိလို့လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးအလွန်ဆုံးတစ်ထောင်ထပ်ပေးမယ် ဒီထက်ပိုမပေးဘူး ဆိုပြီးငြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ ဂိတ်က စောင့်နေတဲ့အလှည့်ကျကားသမားကို မတက်ဘူးတဲ့ ဂိတ်ပိတ်မယ် ခင်ဗျားလည်းပြန်တော့ ဂိတ်ပိတ်ပြီ ဆိုပြီးလုပ်ပါတော့တယ်။ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်လည်းတာဝန်ရှိသူတွေထံဆက်သွယ်ရပါတော့တယ်။
ပထမဆုံးမြင့်မြတ်သွေးလှူရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောတော့ ထိုအကိုကလည်း ချက်ချင်းပဲဂိတ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဂိတ်ကလုံးဝမလျော့ပါဘူး။ဒီအချိန်ဂိတ်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအသံထွက်လာပါတယ်။CBTမှာပဲ အခန်းငှါးအိပ်ပြီး မနက်မှတက်ကြပေါ့တဲ့။(နောက်ပိုင်း CBTမှလူတွေပြောသောကြောင့် တစ်ဦးကို အပြီးအစီး 15000 ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လူသုံးဦး တဲတစ်လုံးကို 15000 ဖြစ်ကြောင်းသိရပာတယ်။Edit)
ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေတာကြောင့် ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားပါတယ်။သူကလည်း ဘာစီစဉ်ပေးရမလဲပြောရှာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအခွင့်ထူးခံပြီးFOCမလုပ်ချင်တာကြောင့် ကျန်တာမလိုပါဘူး ပုံမှန်သတ်မှတ်ကြေးနဲ့သာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့အကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဂိတ်ကိုလှမ်းပြီးဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ် ဆိုပြီးဘာမှဆက်မဖြစ်လာတော့ပါဘူး။မြင့်မြတ်သွေးလှူရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်လည်း အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ဖို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသွားတွေ့နေကြောင်းပြောလာပါတယ်။
ညနေ၆နာရီကျော်လာတော့ မစောင့်နိုင်တော့တာနဲ့ အဆင်မပြေရင် ခရိုင်ကိုလှမ်းပြီးအကူညီတောင်းရမယ့်အကြောင်း ပြောတော့မှ ဂိတ်ကအချင်းချင်းပြန်ငြိကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမြင့်မြတ်သွေးလှူရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌက တစ်ယောက်ကို၄၀၀၀နဲ့ပဲတက်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော့်အထင်လိုငွေကို ဥက္ကဋ္ဌကစိုက်ပေးလိုက်ရတယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ညနေ ၆နာရီ၁၅မှတောင်တက်ခဲ့ရပါတယ်။
1.ဂိတ်ရဲ့စည်းကမ်းတွေကို ပြောင်းချင်သလိုပြောင်းလို့ရလား။ကိုယ့်ခြံထဲကကြက်ကိုယ်ကြိုက်သလိုချက်စားစားကြော်စားစားဆိုပြီးလုပ်လို့ရလား။ခရီးသည်တွေမြင်သာအောင် စည်းကမ်းချက်တွေကို ဘာလို့မထားတာလဲ။
2.တောင်တက်လမ်းကအရမ်းအန္တရာယ်များတဲ့အတွက် သူတို့ဆီကကားတွေနဲ့ပဲအတက်ခံတယ်။ဒါပေမယ့်ကားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုဂရုစိုက်စစ်ဆေးမယ့်အဖွဲ့မရှိဘူး။Driverမပြင်ရင် ဘယ်သူမှအရေးမယူဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်လာမှသာကံဆိုးသူထိပေါ့။
3.CBTမှာအိပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စ။စင်းလုံးငှါးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးတယ်။မငှါးရင်အိပ်စရာCBTပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်။ကားနဲ့ဂျင်းမရရင်း CBTနဲ့ဂျင်းမယ်ပေါ့။လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကတော့ကိုယ့်အတွေးပါ သဘောရိုးနဲ့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
5.စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသက ဖွံ့ဖြိုးမှုနောင့်နှေးနေတာကြောင့် ခရီးသွားလာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကို နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ကို လုပ်ဆောင်နေတာပါ။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပါအာရုံထားပြီးMediaတွေ၊Travel Bloggerတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအင်အားအကုန်သုံးပြီးလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးနိုင်မှုအားအရမ်းနည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။မြင့်မြတ်သွေးလှူရှင်အသင်းသာမကူညီခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ ခရိုင်အကူအညီပါယူရမလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
6.တောင်တက်ကားအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဆိုးတွေထွက်နေတာကြာပါပြီ။လောလောဆယ်လည်း အစိုးရခရီးစဉ်နဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလာတဲ့ မဇ္ဇျိမအဖွဲ့သားတွေလည်း ဒီလိုပဲကြုံနေရကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒီတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေရင် ဇလုံတောင်ခရီးစဉ်ဟာ ဂျင်းခရီးစဉ်အဖြစ်နဲ့နာမည်ဆိုးတွေပဲဆက်ထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဇလုံတောင်တက်မယ်ဆိုရင် တောင်တက်ကားဂိတ်ရဲ့ ဂျင်းကိစ္စကို ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့သတိထားမိဖို့ ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ✌✌✌
ဒီပွသနာလေးကိုမကျြနှာနာစရာလေးတှရှေိနတောကွောငျ့မရေးပဲနမေလို့တှေးထားပမေယျ့ တျောတျောလေးနာမညျထှကျလာတာရော ကိုယျ့pageထဲကခရီးသှားတှေ ဂငျြးမမိစခေငျြတာကွောငျ့ရော မကျြနှာပကျြခံပွီးပွောခငျြပါတယျ။ကနနျးဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးခရီးစဉျလေးသှားရငျးနဲ့ ဇလုံတောငျကိုပါလှညျ့ဝငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ခရိုငျကနပွေီးကူညီပေးမယျ့အကွောငျးပွောပမေယျ့ ကိုယျ့Team ကလူတှအေကုနျလုံးက သာမနျခရီးသညျတှအေတိုငျးပဲသှားခငျြတာကွောငျ့ ကိုယျ့အစီအစဉျနဲ့ကိုယျသှားခဲ့ကွပါတယျ။တောငျတကျကားတှရှေိတဲ့ CBTစခနျးကိုရောကျတော့ ညနေ၎နာရီလောကျပါ။တောငျတကျခက တဈဦးကိုအတကျ ၃၀၀၀ အဆငျး၃၀၀၀ပေးရပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့က၆ယောကျပါ။ဗနျးမောကျမွို့မွငျ့မွတျသှေးလှူရှငျအသငျးဥက်ကဋ်ဌကိုယျတိုငျက ကားဂိတျကိုဖုနျးဆကျပွီးကြှနျတျောတျိုအဖှဲ့တကျမယျ့အကွောငျးပွောပေးထားပါသေးတယျ။ကြှနျတျောတို့CBTရောကျတော့ကားအသငျးကမေးပါတယျ။ကားစငျးလုံးငှါးတကျမှာလား ရိုးရိုးတကျမှာလားပေါ့။စြေးမေးတော့စငျးလုံးငှါးရငျ ၄၅၀၀၀ပေးရပါတယျ။ရိုးရိုးတကျမယျဆိုရငျတော့လူ၁၅ယောကျပွညျ့အောငျစောငျ့ရမယျပေါ့။ကြှနျတျောတို့လညျးရိုးရိုးတကျမယျပဲပွောလိုကျတယျ။အဲပွသနာကအဲ့မှာစတာပါပဲ။ပထမကတော့ နောကျထပျ၅ယောကျလောကျရရငျထှကျမယျပေါ့။တကယျတမျးသူတို့ရဲ့စနဈက လူ၅ယောကျအထကျရှိရငျ ခရီးသညျကိုတဈနာရီပဲစောငျ့ခှငျ့ရှိပါတယျ။လူမပွညျ့ရငျလညျး တကျရပါတယျ။လိုတာကိုတော့ဂိတျကဆိုကျပေးရပါတယျ။ညနေ၅နာရီခှဲကြျောတဲ့အခါမှာတော့ ဂိတျကလာပွောပါတယျ။
လူမပွညျ့တဲ့အတှကျ ၃၅၀၀၀ နဲ့ စငျးလုံးငှါးရမယျပေါ့။ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့စရောကျတဲ့အခြိနျထဲကသာ ဂိတျပိတျခြိနျ(6)နာရီ ရောကျလို့မှလူမပွညျ့ရငျ စငျးလုံးငှါးရမယျဆိုပွီးပွောခဲ့ရငျ ကြှနျတျောတို့အပွဈမပွောပါဘူး။အဲ့အခြိနျမှာအလှညျ့ကထြှကျရမယျ့ကားကအသငျ့ရှိပါတယျ။ဒါပမေယျ့မထှကျပေးပါဘူး။ကြှနျတျောတိျု့လညျး ဂငျြးဆိုတာသိလို့လုံးဝမပေးနိုငျဘူးအလှနျဆုံးတဈထောငျထပျပေးမယျ ဒီထကျပိုမပေးဘူး ဆိုပွီးငွငျးပါတယျ။အဲ့တော့ ဂိတျက စောငျ့နတေဲ့အလှညျ့ကကြားသမားကို မတကျဘူးတဲ့ ဂိတျပိတျမယျ ခငျဗြားလညျးပွနျတော့ ဂိတျပိတျပွီ ဆိုပွီးလုပျပါတော့တယျ။ဒီလိုအခွအေနဖွေဈလာတော့ ကြှနျတျောလညျးတာဝနျရှိသူတှထေံဆကျသှယျရပါတော့တယျ။
ပထမဆုံးမွငျ့မွတျသှေးလှူရှငျအသငျးဥက်ကဋ်ဌကိုဆကျသှယျပွီးပွောတော့ ထိုအကိုကလညျး ခကျြခငျြးပဲဂိတျကိုဖုနျးဆကျပေးပါတယျ။ဒါပမေယျ့ဂိတျကလုံးဝမလြော့ပါဘူး။ဒီအခြိနျဂိတျမှာရှိတဲ့လူတဈယောကျကအသံထှကျလာပါတယျ။CBTမှာပဲ အခနျးငှါးအိပျပွီး မနကျမှတကျကွပေါ့တဲ့။(နောကျပိုငျး CBTမှလူတှပွေောသောကွောငျ့ တဈဦးကို အပွီးအစီး 15000 ဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။လူသုံးဦး တဲတဈလုံးကို 15000 ဖွဈကွောငျးသိရပာတယျ။Edit)
ကြှနျတျောတို့လညျးအဆငျမပွတောကွောငျ့ ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့ ဗနျးမောကျမွို့နယျအထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူးထံဖုနျးဆကျပွီးအကွောငျးကွားပါတယျ။သူကလညျး ဘာစီစဉျပေးရမလဲပွောရှာပါတယျ။ကြှနျတျောတို့လညျးအခှငျ့ထူးခံပွီးFOCမလုပျခငျြတာကွောငျ့ ကနျြတာမလိုပါဘူး ပုံမှနျသတျမှတျကွေးနဲ့သာအဆငျပွအေောငျလုပျပေးဖို့အကူညီတောငျးလိုကျပါတယျ။ကြှနျတျောဂိတျကိုလှမျးပွီးဖုနျးဆကျလိုကျပါမယျ ဆိုပွီးဘာမှဆကျမဖွဈလာတော့ပါဘူး။မွငျ့မွတျသှေးလှူရှငျအသငျးဥက်ကဋ်ဌကိုယျတိုငျလညျး အဆငျပွအေောငျစီစဉျဖို့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးထံသှားတှနေ့ကွေောငျးပွောလာပါတယျ။
ညနေ၆နာရီကြျောလာတော့ မစောငျ့နိုငျတော့တာနဲ့ အဆငျမပွရေငျ ခရိုငျကိုလှမျးပွီးအကူညီတောငျးရမယျ့အကွောငျး ပွောတော့မှ ဂိတျကအခငျြးခငျြးပွနျငွိကွပါတယျ။နောကျဆုံးမွငျ့မွတျသှေးလှူရှငျအသငျးဥက်ကဋ်ဌက တဈယောကျကို၄၀၀၀နဲ့ပဲတကျလို့ရအောငျစီစဉျပေးထားတယျပွောပါတယျ။ကြှနျတေျာ့အထငျလိုငှကေို ဥက်ကဋ်ဌကစိုကျပေးလိုကျရတယျထငျပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ပဲအဆငျမပွမှေုမြားစှာနဲ့ညနေ ၆နာရီ၁၅မှတောငျတကျခဲ့ရပါတယျ။
1.ဂိတျရဲ့စညျးကမျးတှကေို ပွောငျးခငျြသလိုပွောငျးလို့ရလား။ကိုယျ့ခွံထဲကကွကျကိုယျကွိုကျသလိုခကျြစားစားကွျောစားစားဆိုပွီးလုပျလို့ရလား။ခရီးသညျတှမွေငျသာအောငျ စညျးကမျးခကျြတှကေို ဘာလို့မထားတာလဲ။
2.တောငျတကျလမျးကအရမျးအန်တရာယျမြားတဲ့အတှကျ သူတို့ဆီကကားတှနေဲ့ပဲအတကျခံတယျ။ဒါပမေယျ့ကားရဲ့ကွံ့ခိုငျမှုနဲ့လုံခွုံမှုကိုဂရုစိုကျစဈဆေးမယျ့အဖှဲ့မရှိဘူး။Driverမပွငျရငျ ဘယျသူမှအရေးမယူဘူး။အဲ့တော့ဖွဈလာမှသာကံဆိုးသူထိပေါ့။
3.CBTမှာအိပျခိုငျးတဲ့ကိစ်စ။စငျးလုံးငှါးဖွဈသှားအောငျဖနျတီးတယျ။မငှါးရငျအိပျစရာCBTပဲရှိတယျ။အဲ့တော့တဈခကျြခုတျနှဈခကျြပွတျ။ကားနဲ့ဂငျြးမရရငျး CBTနဲ့ဂငျြးမယျပေါ့။လကျဝါးခငျြးရိုကျထားသလိုဖွဈနတေယျ။ဒါကတော့ကိုယျ့အတှေးပါ သဘောရိုးနဲ့ပွောတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
5.စဈကိုငျးတိုငျးဒသေက ဖှံ့ဖွိုးမှုနောငျ့နှေးနတောကွောငျ့ ခရီးသှားလာရေးဖှံ့ဖွိုးရေးကို နိုငျငံတျောအဆငျ့အနနေဲ့ကို လုပျဆောငျနတောပါ။တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ကပါအာရုံထားပွီးMediaတှေ၊Travel Bloggerတှနေဲ့သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးအငျအားအကုနျသုံးပွီးလုပျဆောငျနခြေိနျမှာ ဒသေဆိုငျရာအစိုးရအဖှဲ့တှအေနနေဲ့ဂရုတစိုကျပူးပေါငျးပါဝငျပေးနိုငျမှုအားအရမျးနညျးတယျလို့ထငျပါတယျ။မွငျ့မွတျသှေးလှူရှငျအသငျးသာမကူညီခဲ့ရငျကြှနျတျောတို့တှေ ခရိုငျအကူအညီပါယူရမလိုဖွဈသှားခဲ့ရပါတယျ။
6.တောငျတကျကားအသငျးနဲ့ပတျသကျပွီးသတငျးဆိုးတှထှေကျနတောကွာပါပွီ။လောလောဆယျလညျး အစိုးရခရီးစဉျနဲ့ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးလာတဲ့ မဇ်ဇြိမအဖှဲ့သားတှလေညျး ဒီလိုပဲကွုံနရေကွောငျးသိရပါတယျ။
ဒီတော့ဒီတိုငျးပဲဆကျသှားနရေငျ ဇလုံတောငျခရီးစဉျဟာ ဂငျြးခရီးစဉျအဖွဈနဲ့နာမညျဆိုးတှပေဲဆကျထှကျလာဖို့ရှိနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဇလုံတောငျတကျမယျဆိုရငျ တောငျတကျကားဂိတျရဲ့ ဂငျြးကိစ်စကို ဘယျလိုမြိုးဖွရှေငျးကွမလဲဆိုတာ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့သတိထားမိဖို့ ဒီအတှအေ့ကွုံလေးကိုတငျပေးလိုကျပါတယျ။ ✌✌✌
၄ တန်းပါ..ကိုယ်​၀န်​က ၈ လပါတဲ့…မိဘတွေက ဆင်းရဲတော့ ကလေးတင့်တောင်းတင့်တယ်ဖြစ်အောင် မွေးစားဖို့ပေးတာ မွေးစားတဲ့သူက စော်ကားတာတဲ့
ဒီသမီးငယ်​က​တော့ ကူညီ​ပေးခဲ့ဖူးသမျှထဲအငယ်​ဆုံးစံချိန်​ပါပဲ.. ၄ တန်းပါ..ကိုယ်​၀န်​က ၈ လပါ.. သူ့ဇာတ်​လမ်း​လေးကလည်း ဆင်​ခြင်​စရာပါပဲ.. မိဘ​တွေက ဆင်းရဲလွန်း​တော့ သမီး​လေးကို တင့်​တင့်​တယ်​တယ်​​လေးထားနိုင်​​အောင်​ ဟိုးငယ်​ငယ်​ထဲက ​မွေးစားမိဘ​တွေလက်​ထဲ ​မွေးစားဖို့​ပေးထားတယ်​.. အဲဒီ​မွေးစား အ​ဖေက သမီး​လေးကို ​စော်​ကားတာပါ.. ဒီစာ​တွေ ၊ ဒီအ​ကြောင်း​တွေကို ကျွန်​​တော်​ မ​ရေးချင်​.. လူ​တွေက …
မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချမ်း၏ စကားလေးများ
ကျွန်တော်ဟာ နယ်ပယ် အနည်းငယ်မှာ ထူးချွန်ပေမယ့် နယ်ပယ်အများစုမှာတော့ တော်တော်ကို ညံ့ပါတယ်။ အခြေအနေတွေက ကိုယ့်ကို ထိမ်းချုပ်တာကို မခံနဲ့ဗျာ ကိုယ်ကပဲ အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲပြီး ထိမ်းချုပ်လိုက်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေလုပ်ဖို့မလိုဘူး ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေပဲ လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစာပါ။ လူတွေကပြောတယ် စတန့်လုပ်နဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်က မကြောက်တတ်ဘူးတဲ့ မကြောက်ပဲနေ …
လက်ရှိကမ္ဘာမှာ အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံး ရရှိနေကြတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသား (၁၀) ဦး
တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ Hollywood ဆိုတာ အကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးပါပဲ။ အနုပညာဟာ ကမ္ဘာကို အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးနဲ့ သြဇာအသက်ရောက်နိုင်ဆုံးပါပဲ။ အဲလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အနုပညာလောကရဲ့ ထိပ်ခေါင်မင်းသား (၁၀) ဦးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 10. Akshay Kumar: $35.5 သန်း 9. Salman Khan: $37 သန်း …